नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको छ। अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई राम्रो, सस्तो र स्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयको खोजीमा छन्। अभिभावकलाई आकषिर्त गर्न उपत्यकामा अंग्रेजी नामका स्कुलहरू खोलिएका छन्। र, यस्ता स्कुलहरू हरेक वर्ष थपिने क्रम जारी छ। अंग्रेजी माध्यमको शिक्षामा पारंगत भएको छनक दिन यस्ता स्कुलहरूले विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय, ठाउँ, वैज्ञानिक र प्रसिद्ध व्यक्तिका नामसमेत उपयोग गर्ने गरेका छन्।
उपत्यकामा क्याम्बि्रज र अक्सफोर्ड नामकरण गरएिका विद्यालयका साइनबोर्ड देख्न थालिएको त धेरै वर्ष भइसक्यो। बेलायत र अमेरकिामा रहेका यस्ता नामका विश्वविद्यालयसँग भने नेपालका यी कलेजको कुनै साइनो छैन। पेन्टागन अमेरकिी रक्षा मन्त्रालयको नाम हो तर नेपालमा यस्तै नामको कलेज छ भन्ने सुन्दा सक्कली पेन्टागनमा काम गर्नेहरू पक्कै पनि छक्कै पर्दा हुन्। नासा अमेरकिी अन्तरक्ष्िा विज्ञानसम्बन्धी संस्था हो। यता नेपालको राजधानी काठमाडौँमा भने नासा कलेज चर्चित छ। उताको नासा एउटा काम गर्छ, यताको नासाले अर्कै।
यस्तै, टेक्सास, टि्रनिटी, कोलम्बिया, भर्जिनिया, बु्रकफिल्ड, मेरल्ियान्डजस्ता नाम पनि अमेरकिाका राज्य र ठाउँका हुन्। यी नाम यता भने कलेजका नाम बनेका छन्। क्याम्बि्रज इन्टरनेसनल उच्च मावि कलंकीमा ३ कक्षामा आफ्ना १० वषर्ीय छोरालाई पढाइरहेका विश्वमान खड्का भन्छन्, "अंग्रेजी नाम छ, पक्कै राम्रो होला भनेर छोरालाई भर्ना गरेको हुँ।" यसो त उक्त विद्यालयका निर्देशक कृष्ण पाण्डे पुरातनवादी नामको साटो विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयको नाम राखेर सोही स्तरको शिक्षा दिइरहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "नामले मात्रै केही हुने होइन। पढाइ राम्रो भयो भने विद्यार्थी स्वतः आउँछन्। त्यही पनि रावण नाम किन राख्ने, राम नै ठीक हो नि !"
त्यसैगरी, व्यक्तिका नामबाट पनि उपत्यकामा आफ्ना विद्यालयको नामकरण गर्ने चलन बाक्लै देखिन्छ। अमेरकिा पत्ता लगाउने कोलम्बस नभएर अरू नै भइदिएको भए नेपालमा कोलम्बस एकेडेमी जन्मिने थिएन। अमेरकिाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनकी छोरी चेल्सी नभए यताको विद्यालयको नाम चेल्सी हुन्थेन कि ?
नेपाली शब्दलाई समेत उल्था गरीकन अंग्रेजीकरण गरेर विद्यालयको नाम राखेको देख्न सकिन्छ। जस्तै- लालीगुराँस आफैँमा नेपालको राष्ट्रिय फूल हो। यसलाई अंग्रेजीमा 'रोडोडेन्ड्रोन' भनिन्छ। यही नाम गरेको उच्च मावि छ, कलंकीमा। यस्ता धेरै नाम छन्। जस्तो- बि्रलियन्ट एजुकेसनल उच्च मावि, जिलेट उच्च मावि, एक्टिभ एकेडेमी, कलेज अफ अप्लाइड बिजनेस, क्यापिटल हिल एकेडेमी, क्रिमसन इन्टरनेसनल, जुबिलेन्ट।
रमाइलो त के छ भने नेपाली नाम भएका विद्यालयले पनि धमाधम नाम फेररिहेका छन्। केहीले नाम फेर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिइरहेका छन्। तारकेश्वरबाट रचिमन्ड एकेडेमी बनाइएपछिका पि्रन्सिपल नरेन्द्र कायस्थ बेलायतको एउटा सहर र विश्वविद्यालयको नामबाट आफूहरूले नाम राखेको बताउँछन्। भन्छन्, "सबैतिर अंग्रेजी नामका स्कुल, कलेज भएकाले नेपाली नाम त नचल्लान् जस्तो भइसक्यो। यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन। सबैले गरेपछि हामीले पनि नाम फेर्न बाध्य हुनुपर्‍यो।"
कायस्थले विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई आकषिर्त गर्न पनि अंग्रेजी नाम राख्नुपरेको कुरा लुकाएनन्। उनी निजी मात्रै नभई सरकारद्वारा सञ्चालित ललितपुर कलेजले नाम फेरेर मस्को इन्टरनेसनल कलेज राखेको उदाहरण दिँदै भन्छन्, "जसोजसो बाहुनबाजे उसैउसै स्वाहा गर्नुपर्ने रहेछ।" नेपालीबाट अंग्रेजीमा नाम फेरएिका विद्यालय र उच्च माविहरूको फेहरस्ित लामो छ। तारकेश्वरबाट रचिमन्ड एकेडेमी, उमामहेश्वरबाट टाइम्स, तारापुञ्जबाट बर्नहार्ट, दीपिका शिक्षा सदनबाट उडबि्रज इन्टरनेसनल, मिलन विद्या मन्दिरबाट स्कलर्स एकेडेमीलगायत । -हेर्नूस्, बक्स)
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यालयका नाममा अंगे्रजीकरण हुँदै जानुलाई दुई किसिमबाट व्याख्या गर्छन्। पहिलो, अभिभावकहरू सचेत नभएका कारण तिनलाई झुक्याउन सफल भएका छन्। शिक्षाजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गररिहेकाहरू। दोस्रो, आफ्नो देश र मौलिकतामा केही छैन, सबै विदेश र विदेशीको मात्रै राम्रो छ भनेर भ्रम फैलाउन यी नामले पनि काम गरेका छन्। विद्यालय सञ्चालकलाई आफूले समेत यसबारेमा प्रश्न गरेको स्मरण गर्दै शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, "विदेशमा सम्बन्ध विस्तार गर्न र सहयोग माग्न सजिलो होला कि भनेर यस्तो नाम राखेको भन्नेहरू पनि भेटिए।"
नाममा अंग्रेजी आकर्षण देखिए पनि नेपालको निजी शिक्षाको गुणस्तरबारे बहस हुँदा भने यस्ता कलेजहरूले बढी महँगा भएको आलोचना खेप्दै आइरहेका छन्। यस्ता कलेजमा नाम अनुसारको शैक्षिक गुणस्तर छ कि छैन, यसको अनुगमन भने अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन।
नेपालीबाट अंग्रेजीकरण गरिएका केही विद्यालयका नाम
दीपिका शिक्षा सदन उडबि्रज इन्टरनेसनल
नवरत्न अंग्रेजी एम्स इन्टरनेसनल
नवीन विद्यालय पाराडाइज
वीरेन्द्र ऐश्वर्य शिक्षा सदन फ्युजन एकेडमी
तारा पब्लिक स्कुल स्टार्स पब्लिक
ज्ञान उद्यान बोर्डिङ् ग्रेफोर्ड इन्टरनेसनल
माछापुच्छे्र स्कुल युनाइटेड स्कलर्स
शुभयुग विद्याश्रम क्यापिटल हिल
उन्नयन शिक्षा सदन सिरडी साई एकेडमी
सिद्धार्थ विद्यापीठ बि्रजवाटर एजुकेसन
वसुन्धरा इन्टरनेसनल मोरगन इन्टरनेसनल